Top 10 Mgbe mmetụta Uzo mkpirisi na Video edezi
Ebe e nweghị n'enweghị obi abụọ ike na ikike nke Mgbe mmetụta maka eke elu àgwà, ọrụ mmetụta maka ụdị ọ bụla nke video, otu n'ime ihe ndị na-nwere ike seep elu usoro ukwu bụ ojiji nke keyboard mkpirisi ụzọ. Lee, m bulie top 10 kasị bara uru timesavers ị pụrụ ịmụta na gị Mgbe mmetụta workflow.
My nọmba otu shortcut, nanị n'ihi na ọ dịghị a oru ngo na mgbe ọ bụla e mere ka ebe ọ na-apụghị ga-eji, bụ Ụzọ mkpirisi na-ahọpụta a onwunwe a oyi akwa na-enweghị ịgbasa ya niile n'ụzọ zuru ezu.
Nke a N'ezie bụ inyefe ọtụtụ keyboard iwu n'ime otu ntinye, ma m na-eche abaharede ndị a ga-ịghọ aghụghọ ule a obere, n'ezie, ọ bụ nanị otu shortcut. Iji ha, nanị họrọ oyi akwa na pịa kwesịrị ekwesị button, na ihe onwunwe ga-apụta.
A ga-emepe Anchor Point
P emepe Position
S emepe n'ọtụtụ
T emepe Opacity
U-ekpughe niile Njirimara na a keyframe
UU (abụọ mgbata U) ekpughe niile gbanwere Njirimara
2. Tinye Expression
Onye a bụ ọzọ na-akawanye a otutu ojiji na otú na-egosi ebe a, ọ bụkwa eziokwu na ọ dịghị azọpụta a otutu oge na menu usoro dị ka mma. Alt maka Windows, nhọrọ maka Mac, na pịa na elekere nkwụsị n'ihi na ihe onwunwe na ị bụ mgbe.
Nice na mfe N'ezie, kemgwucha bara uru na a timesaver maka ndị mgbagwoju anya animations. I nwekwara ike iji otu shortcut wepụ ngosipụta dị ka mma.
3. eke ọhụrụ oyi akwa
Ị nwere ike na-ahụkarị a isiokwu ebe a, ihe na-ji otutu nwere shortcut iji nweta ngwa ngwa, ma ọ bụ ihe ndị a ka mkpirisi e mepụtakwara maka.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na e nwere ụzọ mkpirisi niile nkịtị oyi akwa ụdị-ekwe ka ị ngwa ngwa tinye ọhụrụ oyi akwa ka a oru ngo. N'ihi na solids nwere nnọọ ọtụtụ ojiji, vignettes na na, ha na-ọma uru na-echeta. Ndị a bụ n'ezie, windows mkpirisi, dochie Control na Wụk maka Mac aficionados.
Rịbakwa ama shortcut ịgbakwunye mgbanwe oyi akwa na ala na ala, ọzọ na-eji Wụk n'ọnọdụ Control maka Macs.
4. ọnụ ọgụgụ na reposition họrọ n'ígwé dabara mejupụtara
A ezigbo ere ma ọ bụrụ na ị na-eji a dịgasị iche iche nke footage na n'ígwé si dị iche iche na isi mmalite, a nkọ obere shortcut resizes na emmepe n'ígwé dabara n'ime ha mejupụtara. Lee, m melite a oyi akwa purposely ibu karịa ndị mejupụtara, dị ka ị pụrụ ịhụ.
Nanị na ịpị Control Alt na F (Wụk Option F maka Macs) hiwere isi ya na ndị mejupụtara etiti ma ọkụ ya size, nile na otu mfe ime ihe.
A onye ukwu, na dị ka kwuru, n'ihi na ndị mgbe nile na-eji a ìgwè ndị dị iche iche nke isi mmalite ezigbo ihe enyemaka na workflow.
Onye a bụ eleghị anya otu n'ime ndị ọzọ maara nke ọma mkpirisi, ọkụkụ 0 na igodo na-amalite a Ram preview ma na Mac ma ọ bụ Windows nyiwe. Otú ọ dị, na njupụta nke ndị wireless Mac keyboards na-enweghị a ahụigodo ahụ, Adobe ahụwo kwesịrị ekwesị ịgbakwunye na ihe ọzọ shortcut maka Mac naanị iji nweta a gburugburu, nke bụ Control na efu.
Na ikekwe bụghị otú maara nke ọma na ruru a aha ebe a.
6. Paghaa usoro iheomume otu etiti
Onye a bụ oké akpan owo ọ bụrụ na ị na-akwali ịga a nkpuchi, na-agbakwunye na a ngagharị blur ma ọ bụ ndị ọzọ na ngagharị graphic n'ime a video ma ọ bụ yiri ọrụ. Inwe ike na-enwe ọganihu ma ọ bụ regress usoro iheomume a otu etiti na oge na-abịa kemfe na ọtụtụ ọnọdụ. N'ihi na m na, ọ bụ Iweputa ọrụ eruba na n'ezie na-eme ka onye a otú bara uru, a dị mfe isi pịa na m jidesie ọzọ etiti na-enweghị na-eche echiche, na na bụ ọdịdị zuru oke nke a bara uru shortcut.
Ihe ọzọ otu ebe a, ma n'ezie a iche iche shortcut, na-akpụ akpụ na-atụ ma ọ bụ azụ 10 okpokolo agba na oge, dị nnọọ ka bara uru na ọnọdụ ụfọdụ na uru gụnyere ebe a.
Iji Control na nri ma ọ bụ n'aka ekpe akụ na PC, Wụk na nri ma ọ bụ n'aka ekpe akụ na Mac maka otu etiti, tinye nnofega ka Nchikota ịkwaga 10 okpokolo agba.
7. Resize na reposition a oyi akwa
Nke a bụ yiri ka ọnụ ọgụgụ anọ shortcut, na ọ na-adaba ọ bụla oyi akwa n'ime mejupụtara, Otú ọ dị onye a na-ekwusi ike na mbụ akụkụ ruru ebe ọ na-eme ya. Nke a pụrụ iyi a nnukwu ihe dị iche, ma na okwu nke workflow maka emeso otu n'usoro nke ọsọ ọsọ na mmepụta chọrọ, ọ bụ n'ezie.
Ọ bụrụ na anyị na-aga azụ anyị gara aga ọnọdụ a oyi akwa ahụ bụ ibu karịa mkpokọta dị ka anyị gosiri n'ihu.
Ọkụkụ Control + Alt + Mgbanwe + H (Wụk + Option + Mgbanwe + H maka Mac) dabara ya na mkpokọta ma na-eme ẹdude akụkụ ruru ka anyị na-ahụ ebe a.
8. Kpaa Layer
A bụ ihe ọzọ dị mfe edinam na ike ga-mere na-enweghị interrupting a workflow site na iji shortcut.
Trimming oyi akwa ka usoro iheomume welara bụ ihe bara uru edezi ngwá ọrụ mgbe emeso multiple n'ígwé e mere iji na-agba ọsọ concurrently kama n'out oge.
Nke a bụ nnọọ mfe na-eme na a shortcut, ị nwere gị oyi akwa na ị chọrọ ya kwụsị na ụfọdụ oge, nanị ịtọ usoro iheomume welara na ziri ezi ebe
Mgbe ahụ nanị iji Alt + [ma ọ bụ] n'ihi na windo, na Option + [ma ọ bụ] on Mac.
A ka ihe atụ m ji] mgbodo ka ewepụtụ njedebe nke oge welara, na [ga-ewepụtụ mmalite mgbe ahụ.
9. usoro iheomume Zoom ka Single Frames
Ọ bụrụ na ị ihe ọ bụla dị ka m, na ị na-mgbe niile na-achọ ka ping azụ na-apụta n'etiti otu etiti echiche na usoro iheomume na nabatara umu echiche ka m gaa. Ebe ndị mmịfe mmanya bụ mgbe n'ebe dị anya, inwe ike mbugharị ziri ezi nke otu etiti, na mgbe ahụ nri azụ si dum mejupụtara oge bụ a ere ọ bụla workflow.
Ị nwere ike nweta a nanị site na iji; isi, na ma Mac na Windows.
10. N'ịga na usoro iheomume welara ka oyi akwa na ya ihe
Ikpeazụ anyị otu, na ọzọ kemgwucha bara uru shortcut maka emeghari multiple n'ígwé na footage usoro-enweghị interrupting na workflow, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ngwa ngwa na-enwe ọganihu ka si n'ókè nke gị ugbu a oyi akwa, nanị pịa O, gaa na isi, pịa m , ọ bụ otu ihe ahụ Mac na Windows, ihe dị mfe onye na-echeta na-ọma uru ime otú ahụ.
N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe, Adobe ebipụta a zuru ndepụta nke ha na ha na-akwado ngalaba, na n'elu na ọ bụ uru na-echeta na i nwere ike hazie ọ bụla otu shortcut na mmemme ona gị onwe gị na-arụ ọrụ ịke bụrụ na ị chọrọ.
Olee otú Mee Agwa Animation na Mgbe mmetụta
Olee otú Download Movies
> Resource> Video> Top 10 Mgbe mmetụta Uzo mkpirisi na Video edezi